प्रविधी खबर Archives - Page5of9- www.kchhakhabar.com
एजेन्सी। फोनलाई चार्ज गर्न धेरै समय छैन तर छिट्टै चार्ज हुँदैन। फोनलाई घण्टौं चार्जमा राख्दा पनि ब्यट्री फुल नहुने समस्या तपाइलाई पनि परेको होला। फोन एकैपटक चार्ज हुँदैन विस्तारै हुन्छ। यो समस्या पुरानो मात्र होइन नयाँ फोनमा पनि छ। समय नभएको बेला हामी छिटो चार्ज गर्न चाहन्छौं। यदि तपाइँ पनि फोनलाई छिटो चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यी टिप्स अपनाउनुस्। १. फोनलाई ओरिजिनल चार्जरबाट मात्र चार्ज गर्नुस्...
काठमाडौं, २ साउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित एक समारोहबीच ५९ औं प्रहरी संचार दिवस सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा प्रमुख अतिथि माननीय गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्टरनेट बिनाको इमेल प्रविधि (H.F. Radio Data) को समेत उद्घाटन गर्नुभयो । रेडियो प्रविधि र कम्प्युटर प्रविधीको कुराकानी नै H.F. Radio Data प्रविधि हो । यो Military Standard को प्रविधिलाई Software Defined प्रविधि पनि भनिन्छ, जसबाट ई...
लामो प्रतिक्षापछि आयो नोकिया ३ नेपाली बजारमा ! यसको फिचर र मुल्य थाहा पाउनुस्
NOKIA3IN NEPAL: HIGHLIGHT FEATURES AND PRICE Hamro tools June 27, 2017 Among the new lineup of smartphones that have to arrive in Nepal, Nokia3is the best. Nokia3in Nepal, has been launched with the price range of about 15 thousand rupees and its features and price are extremely good in comparison to the other phones of the same category. The Nokia3smartphone hasabundle ...
सोसल नेटवर्किङ कम्पनी फेसबुकले आफ्नो Find Wifi फिचर विश्वका सबै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विश्वका दुई अर्वभन्दा धेरै आइओएस तथा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि Find Wifi फिचर उपलब्ध गराउने भएको हो । फेसबुकले परीक्षणको रुपमा अघिल्लो वर्ष यो फिचर सुरु गरेको थियो । केही देशका एप्पल प्रयोगकर्ताले मात्र यो फिचर उपयोग गर्न पाइरहेका थिए । फेसबुकका इन्जिनियरिङ डाइरेक्टर एलेक्स हिमेलले आ...
सेल्फीको चक्करमा दुई नेपालीले भारतमा ज्यान गुमाए
रबिन्द्र यादव / नवलपरासी –भारतको खड्डा कुशिनगर पनियहवा रेल पुलमा सेल्फी लिदै गर्दा सोमबार बिहान दुई नेपालीको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउने नेपालीहरु नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ साबिक पक्लिहवा-७ बेलवानी बस्ने अन्दाजी बर्ष २७ का शिवेन्द्र कुर्मी र बर्ष १८ का छिमेकी धन्नु कुर्मी रहेका छन । उनिहरुको भारतमा रहेको अाफन्तको मृत्युमा मलामी अाफ्नो बुवा संगै गएको बेला पनियहवा रेलको पुलमा दुई ...
ल्यापटपको मूल्य मोवाइलभन्दा पनि सस्तो
काडमाडौं, ७ असार– प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै धेरैजना यसप्रति आकर्षित भएका छन् । तर आर्थिक कारणले कतिपयले प्राविधिको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसमा पनि झोलामै बोक्न मिल्ने कम्प्युटर (ल्यापटप) प्रयोग गर्ने चाहना कसको नहोला ? तर महङ्गो मूल्यका कारण सबैले यसको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर अब मोवाइलभन्दा पनि कम मूल्यमा ल्यापटपट खरिद गर्न पाइने भएको छ । त्यो पनि दमदार फिचरका साथ । भारतीय कम्पनी आ...
के तपाइकाे माेवायल हराएकाे छ यसाे गर्नुहाेस्
फेसबुकमा निन्दा तथा घृणाजन्य सामाग्रीहरु पोष्ट गरेको अभियोगमा एक व्यक्तिले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । इस्लाम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मदबारे फेसबुकमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको अभियोग लागेका तैमुर राजा नामक व्यक्तिलाई पाकिस्तानको एक अदालतले मृत्युदण्डकोे फैसला सुनाएको हो । सोसल मिडियासँग सम्बन्धित मुद्दामा कुनै अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको यो सायद पहिलो घटना भएको बताइएको छ । उता फेसबुकमा ...
एनसेलले सरकारलाई तिर्‍यो १३ अर्ब कर
काठमाडौँ २१ जेठ । एनसेलले सरकारलाई १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांस कर तिरेको छ । एनसेलले आज (आइतबार) ठूला करदाता कार्यालयलाई पूँजीगत लाभकर अन्तर्गत उक्त कर दाखिला गरेको हो । एनसेलले एक वर्षअघि नै झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ, भने अब बाँकी रहेको १० प्रतिशत कर दायित्व विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराको हो ।स्वीडिसको कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुप...
हाेस गर्नुहाेस् नमजाले फस्नुहोला फेसबुकमा ! हेर्नुहोस साइबर अपराध के हो र कानुनले के भन्छ ?
एक्काईसौँ शताब्दीसँगै तीव्र रूपमा विकास भइरहेको एउटा राम्रो र भरपर्दो सञ्चारमाध्यम हो– इन्टरनेट । यसको माध्यमले आज यो फराकिलो विश्वलाई नै एकै ठाउँमा जोड्न सफल भएको छ । एक ठाउँमा बसेर संसारको सबैभन्दा टाढाको विन्दुसम्म पुग्न सकिने वा घरैमा बसी–बसी संसार घुम्न सकिने माध्यम इन्टरनेटले देश–विदेशका घटना, सुन्दरता, मनोरञ्जनलगायत हरेक सुविधामा पहुँच पु¥याइरहेको छ । यसैका माध्यमले कहिल्यै नसुनिएका कुरा...